12 / 03 / 2018 | RayHaber | raillynews
Maalinta: Maarso 12, 2018
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sameyn doontaa khadka metrooga ee Gebze. Kahor dhismaha qandaraaska shahaadada horudhaca qadka ee loogu talagalay Dowlada Hoose ee Magaalada, dhismaha iyo shaqooyinka korantada ee dhismaha kormeerka qadka, injineernimada iyo adeegyada la tashiga [More ...]
Shiinaha oo bilaabay Tijaabooyin Tijaabo ah oo Xawli Leh
Jaamacadda Jiaotong ee Shiinaha ayaa dhistay wareegga tijaabada 45-mitir loogu talagalay tareenka xawaaraha aadka u dheereeya. Tareenka maglev, oo leh teknolojiyad kor u qaadis magnetic oo aan taaban doonin biraha, [More ...]
Dayuurad cusub ayaa la siiyay Gunsan
Iyada oo dhismaha garoonka cusubi uu si habsami leh u socday, jilic ayaa loo sameeyay si uu u iftiimiyo. Waxaa la go'aamiyay in la qaato shaqooyinka laydhka ee Günsan. Iftiiminta garoonka diyaaradaha ee cusub ee Istanbul oo isu diyaarinaysa inay noqoto goobta kulanka adduunka waa Günsan [More ...]
Dhagaxbuur ayaa ka bilaabmaa Tunnel Longest Tunnel
Dowlada hoose ee İzmir waxay bilawday inay qoddo kritik tunelada ugu dheer ee magaalada olan oo door muhiim ah kuleh mashruuca weyn ee kuxiran doonta Buca iyo Saldhigga Baska. 183 milyan oo ginni waxay muujineysaa wadada oo ay ku jiraan waddo-goynta iyo isgoysyada wadada [More ...]
Safarka Labaad ee Waddanka ee Van Lake oo ka socda Wasaaradda Arimaha Bulshada
Wasiirka UDHR Ahmet Arslan, TCDD doon ugu weyn ee Turkiga "Suldaan ALPARSLAN", baaritaanka laga helay. Suldaan Alparslan Ferry oo loo xilsaaray TCDD xamuulka xamuulka iyo rakaabka inta u dhaxaysa Tatvan iyo Van [More ...]
Wasiirka Arimaha Gudaha Konya-Karaman ayaa Qaadatay Imtixaanka Khadka Xawaaraha Sare
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta, ayaa ku qaaday waddo tijaabo ah khadka tareenka xawaare dheer ku dhexmara Konya iyo Karaman. Wasiir Arslan, ka dib dhismihii xawaaraha sare ee dhismaha ee Çumra Konya Kayacık [More ...]
DEMARD 3 oo magaciisu yahay Boorama
Isuduwaha mashiinada tareenka DEMARD 3 No. Izmir Laanta Madaxtooyada 21. Gudoomiyaha laanta Aziz Dağlı 3. waqtiyada la xushay. Gudoomiyaha doorashada Nami Aras, Xoghayaha Guud Ali Erdogan, 3 [More ...]
Xisaabinta waxay bilaabmaysaa 96 YHT Qandaraasyo
Marxaladda koowaad ee hindisada, oo ay kujirto iibsiga iyo soo saarida 250 Speed ​​Train Train (YHT) oo lagu dejiyey xawaaraha kilomitir 96 saacaddii, waxaa qaban doona Agaasinka Guud ee TCDD bisha Abriil. Turkey tareenka iyo Engine Warshadaha ee Eskişehir [More ...]
RayHaber 12.03.2018 Warbixinta Shirka
Adeegyada La-tashiga Isboortiga ee Kormeerka Gebze Darıca Subway
Tareenada Kadikoy ayaa ku riixaya Biyaha
Intii lagu gudajiray sannado, waxay qaadeen malaayiin, laga yaabee balaayiin rakaab ah, laga raaco Xarunta Tareenka ee Haydarpaşa kuna jihada jihada Gebze. Gawaarida kasta waxaa ku jiray xusuus, rajooyin, iyo rajo wanaagsan. [More ...]
Tirada Tareenada Xawaaraha Sare waxay tagayaan 52
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, ayaa indha indheyn ku sameeyay Mashruuca Başkentray wuxuuna sheegay in Başkentray la siin doono Muwaadiniinta Ankara sida 16-17 Nisan. Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, [More ...]
Khadadka Tareenka ee Bursa wuxuu ka shaqeynayaa tareenka xawaaraha sare leh ee tareenka xamuulka qaada
Kaliya 4 maalmood ayaa uga hadhay qandaraaska weyn… TCDD 6 waxay qaban doontaa qaab dhismeedka suufiga ah ee wadada Bursa-Yenişehir ee khadka tareenka xawaaraha sare lagu dhigay Balat sanado kahor, iyo kaabayaasha iyo jilitaanka suufiyada ee Yenişehir-Osmaneli halkaas oo mashruucu lagu dhammeystirey. Waxa kale oo jira nidaamyo elektiroonig ah oo ku jira xaddiga qandaraaska. Marka la soo gaabiyo… [More ...]
Wasiirka Arslan of Turkey booqday ugu Doomaha ku
Transport, arrimaha badda iyo Wasiirka Isgaarsiinta Ahmet Arslan, ku hawlan gaadiidka rakaabka iyo kuwa xamuulka ee u dhexeeya Van iyo Tatvan ayaa daawan doonta ugu weyn ee Turkiga. Wasiirka Arslan, Gudoomiyaha Van iyo Kuxigeenka Duqa Magaalada Murat Zorluoğlu, [More ...]
Albayrak Turkey waa faani Success mishiinku
Albayrak adeegaya in Eskisehir abaabulan Industrial Makiinado, Indigenous Perón kuwaas oo design iyo soosaarka u gaar ah (Albaabada Platform Screen) Systems Separators Door ay in muddo ah ku saabsan natiijooyinka baadhitaan sannadkii 2 dalka Turkiga [More ...]
2021 Volkswagen Golf GTI iyo GTE hybrid ayaa la soo saaray